I-AutoCAD ibuyela kwi-Mac-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AutoCAD ibuyela kwi-Mac
I-AutoCAD ibuyela kwi-Mac
Alithandabuzeki elokuba umhlaba we-Mac ungcono, kodwa ukungathandabuzeki kwethu ngokuhamba bekusoloko: Kwaye ndenza njani nge-AutoCAD?
Ngubani oya kulikholwa, ngoko kwi-1994 AutoCAD R13c42b Ngaba ngowokugqibela sibone isigidimi siphezulu Powermacintosh. Kwiminyaka eli-18 kamva, i-AutoCAD ye-Mac iyabuya.Ngaloo nyaka kuphela ikhutshiwe kwi-Linux.
Kwenzeka ntoni ukuba iMac endaweni yokufa kwi-niche ekhethiweyo, apho ingenalo ukhuphiswano ngokhetho (Graphics), ibikhula kwizixhobo zekhompyuter ukuya kwinqanaba elinomdla lokwamkelwa. Akukho mntu uthandabuzayo ubuchwephesha beMac, baya kuthandabuza isibini burradas ukuba ngamaxesha ngamaxesha kubanjwe Steve JobsKodwa qhinga Apple uye kuye ukuze uqalise iimveliso ezigqwesileyo, njengoko kunjalo i-iPod, iPhone kwaye ngoku iPad into nokugxekwa abakuqondayo luncedo uyazi ukuba iqonga apho ukwakha izicelo lomzobo hayi ifowuni ubukhulu ibhokisi cornflakes.
Kwimeko ye-AutoDesk, nangona ibalulekileyo kwiimeko ze-CAD ngokubhekiselele kwimeko yeemarike, kunye neengqungquthela ezincinci ezenza ukuba kukhuphiswano lweMicrostation, IntelliCAD, IDataCAD kunye ArchiCADNgaphaya kwendalo esingqongileyo kube yimpumelelo kakhulu kwicandelo loopopayi kunye noyilo lweshishini kule minyaka idlulileyo. Iimveliso ezinje maya Ziyinto yokunethezeka, ukunikela umzekelo.
Ngeli thuba, i-AutoCAD ayikho kuloo mzuzu. Emuva xa wayeshiya umgca enxibe ezimhlophe, iApple yayilwela umhlaba wokuba iPowerZ kunye neArchiCAD ifuna ukuphumelela, eyaqhubeka neMac. yayinamandla (hayi ngenani kodwa kumsi we-astral).
Futhi yiyiphi i-AutoCAD eyinzuzo ngokuya kwi-Mac.
Isiseko sithandwa sam uWatson. Ukusebenza neMac kuya kuba ngcono ukuxhaphaza oovimba kunokuba ulwe nenkumbulo yeePC ezingasasebenziyo ngaphezulu. i 10 izizathu ukupha AutoDesk AutoCAD for Mac ukuba uvavanyo ngokusekelwe koko, yiyo le rush ukuba ndichithe PC 64 thina amasuntswana kwaye ngequbuliso Mac, ngokuba byi ngaphezu itoti Monster.
Siyazi ukuba i-mac ebukhali ayizukufikelela kwinqanaba eliphezulu kwixesha elifutshane kunangoku abanalo ngokubhekisele kwi-PC. Kodwa ungoyisa-kwaye sele esenza- ngezixhobo eziphathwayo. Kwakhona, masiqaphele, ukuba itekhnoloji izakufa, kunokwenzeka ukuba yiPC, engeyoyamntu ingeyiyo iMac, eyi-Apple. Nangona abasebenzisi be desktop abayi kufa.
Ke i-AutoDesk iya kwi-Mac, ngokuyinxenye ngenxa ye-niche yabasebenzisi besicelo se-CAD esele beyicelile kangangeentsuku, kwaye ngokuyinxenye ukufumana indawo yokuboniswa / kwezicelo zoopopayi. Nangona engashukumi, ngokuqinisekileyo ujonge ukuzibeka kwizixhobo eziphathwayo kunye nabanye elektroniki e-oven ezimhlophe; sithetha ngezicelo ze-iphone kunye ne-ipad, apho bonke iqabaneIiplatifti ze-CAD zakha iiprototypes.
Ukungafani kunye nokufana
I-AutoCAD 2011 yeMac iphantse yasebenza ngokufana nePC. Umahluko osisiseko onje:
umsebenzisi kunye nombuzo iRibhoni abaza kuthi njengaye kodwa bavumelaniswe kwisitayela se-palettes ze-Mac.
Ukongezelela unako ukuxhamla yonke into yokugubha imilenze yamhlophe.
Ngesizathu esingaqhelekanga imizila engenayo xa i-AutoCAD yaphuma, eza ne-AutoDesk, musa ukuza. Ndibhekisa kulawulo lweqela le-layer, filter filler kunye ne-set sheet, underlay, ezo kwezo nguqu zisindise umhlaba ngexesha lokushicilela. Nangona ngokuqinisekileyo baya kuza kule ilandelayo.
Akukho ncediso yokungenisa i-dgn, ukuthumela kuma-pdf okanye kwi-dwf.
Kucacile, abayi kuqhuba uhlengahlengiso lweWindows, ezinje ngeVisual Basic Applications, iiOLE Objects okanye iMedia Media. Oku kuluncedo olukhulu ukuba unentuthuko esebenzayo apha, kodwa ezo zakhiwe nge-AutoLisp (Ngaphantsi kweDCL) zibaleka, uninzi lwazo luqhuba kwi-ObjectARX.
Ayizukusebenza kwiibhithi ezingama-32, kuphela ngama-64. Kwaye icela i-3 GB ye-RAM, kwaye ingaphumeleli bacebisa nge-4 GB.
Ngokumalunga nenkxaso yefomathi, iya kuhlala kwi-R14, 2000, 2004, 2007 nango-2010. Kwaye ukuba umntu ufuna ukubona ukuba leliphi iqanda brontosaurus, no kuyenza ndoloze dxf iR12. Ndiyanyanzelisa, akayifunde ukulahla.
Inguqu yezovavanyo zeentsuku ze-30.
I-AutoDesk ilungiselele ukukhutshelwa simahla kwinguqulelo yeentsuku ezingama-30 yokuvavanywa. Kwakhona kumaziko emfundo kuhlala kukho ukhetho lweelayisensi zale njongo. Emva koko unokuthenga ukusuka ekuqaleni, oya phantse kwi-4,000 yeedola okanye uhambise ingxelo yangaphambili ehlawula kuphela iindleko zokudlulisa.
Baye bavula umnyango wokuba ifakwe koomatshini babo ababini. Njengofakelo olunye kwi-PC yeofisi kunye nenye kwiLaptop; oku kuya kuthanda; kodwa kubonakala ngathi ngaphandle kokufuna ukuyenza phuma njengeMicstation.
Kwaye khange bathethe ukuba ezinye izicelo ziya kuya eMac, okwangoku yibhodi yokuzoba kuphela. Kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba aba balandelayo nguMaya kunye no-Inventor. Ngokukodwa, kubonakala kum inyathelo elihle ukusuka kwi-AutoDesk, ukuya kwi-niche ehambisa imali eninzi kwaye bendiyityeshele iminyaka eyi-18. Iinguqulelo ezihambelanayo zeMac sele zibhengeziwe:
Kwimifanekiso: Inventor, Maya, 3ds Max, Alias, Mudbox, Sketchbook.
Ngaphantsi kokwakhiwa: i-Revit Architecture, Ukwakhiwa koBungqina, i-Revit MEP
Njengoko umntu esitsho kwiforum, iindaba zilungile nakwabo basebenzisa iLinux, kuba kunokwenzeka kwiminyaka eli-18 siza kuba nosasazo lwe-Ubuntu. 🙂
Apha unako ukukhuphela inguqulo yezilingo. Nolwazi olungaphezulu kunye namavidiyo apha.
Ngaba kuya kuba ne-Microstation ye-Mac?
Ndonwabile ukubona iprototype yohambo kunye ne-iPad kwi-Inspired. Kodwa, andicingi njalo, nangona bezizamile, ngoku bebezakuba bemi kakuhle kuloo niche.
UBentley ufuna ukugqithisa kwakhe kudume kakhulu
Okwangoku akunakwenzeka ukufaka imifanekiso ye-ECW ye-Georeferenced kwi-Autocad ye-MAC. Ndiye ndacetyiswa lo phuculo kwi-Autodesk. Ukuxhasa le ngcamango iya kule khowudi http://bit.ly/nP3kbV kwaye uvote ngokucindezela inkinobho ye-1.
Abantu abaninzi bacela amathuba amaninzi ukuba kwenziwe
INVENTOR AND MAYA, ulungele, asilahlekanga i-3D yaseburhulumenteni